Tohatra miolaka Handrail vera ho an'ny fitehirizana habakabaka amin'ny trano
Ny tohatra miolakolaka tsara sy sarotra dia heverina ho tampon'ilay asa-tanana. Ny ekipanay matihanina dia manana traikefa, fahaizana ary fahaizana manankarena, ary afaka manome serivisy faran'izay avo lenta indrindra hatramin'ny aingam-panahy hatramin'ny fametrahana.
Ny tohatra miolakolaka voalamina tsara dia manome mihoatra ny tanjon'ny asany fotsiny. Raha ny marina, ny tohatra dia ampahany lehibe amin'ny endrika, teboka ifantohana, ary matetika no fanaka voalohany hitan'ny vahiny.
Ny tohatra miolakolaka ACE dia mamorona teboka mifantoka mahafinaritra sy mahaliana ho an'ny tranonao. Ireo volavolan-tohatra miolaka ireo dia natao namboarina manokana miaraka amin'ny refy sy fitaovana manokana hamoronana endrika tonga lafatra izay mifanaraka tsara isaky ny mandeha. Mihaona amin'ireo mpamorona mpanolo-tsaina ao amin'ny ACE maimaim-poana hanampiana anao hanova ny fahitanao ho zava-misy ary hanova ny habaka misy anao amin'ireo faritra mirindra.
Balustrade Tariby 12mm fitaratra / vy tsy misy fangarony, lalamby fitaratra 10 / 12mm / lalamby vy / namboarina fitaratra antonony na laminated；A3 vy; SS304 / 316 Mazava, satin na fitaratra
Ny vidin'ny rafitra tohatra miolakolaka dia ho faritana amin'ny haben'ny tohatra ilainao, ary koa ny safidy farany nofidinao.
Aorian'ny fankatoavana ny sarin'ny fivarotana, ny rafitry ny tohatra miolakolaka dia mamokatra ao amin'ny orinasa any Foshan, Sina. Izahay dia manana fitaovana fanamboarana hazo, vy ary fitaratra ka afaka manamboatra ny sakan'ny tohatra sy ny arofaninao rehetra izahay.
Ny ifantohan'ny fizotrantsika dia ny fanaovana ny fizotry ny fametrahana ho tsotra araka izay azo atao. Ny stringer dia tapaka amin'ny halavany ilainao. Izahay dia mamoaka ny diany izay alehan'ny bracket mihombo, ary izahay dia manamboatra lavaka mialoha ny diany amin'ny toerana tena alehan'ny paositra. Manana fametrahana fitsapana koa izahay alohan'ny fandefasana.
Teo aloha: Tohatra mahitsy mitsivalana vita amin'ny vy roa
Manaraka: Tohatra vy miady amin'ny harafesina vy ho an'ny habaka kely
Famolavolana tohatra miolaka
Drafitra tohatra miolaka
Fanamboarana tohatra miolakolaka
Tohatra miolaka avo roa heny
Tohatra miolaka maoderina